Macalimiin ka socda ururka dhaqaatiirta dunida oo lagu soo dhaweeyey Jaamacadda Banaadir |
Macalimiin ka socda ururka dhaqaatiirta dunida oo lagu soo dhaweeyey Jaamacadda Banaadir
Xaflad lagu soo dhaweynayey Macalimiin ka socotay ururka dhaqaatiirta Aduunka (Doctors World-wide) kuna soo biirtay Jaamacadda Banaadir ayaa lagu qabtay xarunta Jaamacaddaas ee magaalada Muqdisho.
Waxaa Xafladda ka Qayb-galay masuuliyiin ka tirsan maamulka Jaamacada Banaadir, qaar ka mid ah hormuudyada kulliyadaha Jaamacadaas, arday iyo marti sharaf kale. Xafladan ayaa sidoo kale loogu diyaar garoobayey qelin jebinta boqolaal arday oo dhameysatay Waxbarashada Kulliyadaha kala duwan ee Jaamacadda Banaadir; kuwaasoo dhawaan la guddoonsiin doono Shahadooyinkooda.
Hormuudka kuliyadda caafimaadka Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ugu horeyn ka hadlay munaasabadan ayaa u mahad celiyey ururka dhaqaatiirta Aduunka oo u soo diray labo Macalin oo u dhashay dalka Turkiga kuwaasoo jaamacadda ka gacan siin doona qeybo ka mid ah qeybta taqasusyada ama waxbarashada heerka labaad ee Masterka.
Dr. Biday ayaa ardayda dhowaan ka qelin jebineysa Jaamacada Banaadir u sharaxay qaabka ay u dhici doonto xaflad arintaas loogu talo galay oo dhowaan la qaban doono taasoo uu sheegay iney noqon doonto mid weyn oo ay ka soo geli doonaan madaxda dowlada qaarkood, wuxuuna ardayda farta ugu fiiqay kaalinta kaga aadan qaban-qaabada xafladan iyo waxyaabaha looga baahan yahay arday kasta oo ka mid ah kuwa dhowaan qelin jebinaya.
Prof. Orhan oo ka mid ah dhaqaatiirta Turkiga ah ee ku soo biiray macalimiinta qeybta masterka ee Jaamacada Banaadir ayaa isna sheegay iney ku faraxsan yihiin socdaalka ay ku yimaadeen Muqdisho iyo shaqada uu ka bilaabay Jaamacadda wuxuuna balan-qaaday isaga iyo macalinka la socda iney aqoontooda uga faa’iideyn doonaan ardayda nasiibka u yeelata, isagoo ka mahad celiyey sida diiran ee isaga iyo saaxiibkiis loogu soo dhoweeyey dalka.
Guddoomiyaha Jaamacadda Banaadir Dr. C/risaaq Axmed Dalmar oo munaasabadaas ka hadlay ayaan sheegay inuu ku faraxsan yahay soo dhoweynta dhaqaatiirta Turkiga oo ka mid noqonaya macalimiinta qeybaha taqasusaadka caafimadka ee Jaamacadda, wuxuuna xusay in macalimiintaas ay u soo direen Jaamacada ururka dhaqaatiirta aduunka ee fadhigiisu yahay wadanka Turkiga, taasoo uu sheegay iney guul u tahay Jaamacadda.
“Bisha dambe waxaa Jaamacadda ka qelin doona ardaydii ugu badneyd oo tiradoodu gaareyso 330 aqoonyahan kuwaasoo dhameystay waxbarashada Sideed ka mid ah sagaalka kuliyadood ee jaamacadu ka kooban tahay, waxaana ka mid ah qelin jebiyeyaasha in ka badan 100 dhaqtar oo ka soo baxeysa kuliyada dhaqtarnimada, iyagoo noqonaya kuwii ugu badnaa ee hal mar kuliyadaas ka soo baxa waana u hambalyeynayaa” ayuu Dr Dalmar oo dhinaca kale ku dheeraaday faahfaahinta taqasusyo ay soo kordhisay jaamacada iyo qaar kale oo dhaqaatiirta soo qelin jebisa dalka dibediisa loogu dirayo.
Prof. Cismaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah aasaasayaasha iyo barayaasha Jaamacada Banaadir ayaa isna ka hadlay muhimada ay qeybta masterka ee jaamacada u leeyihiin dhaqaatiirta Turkiga ah ee macalimiinta ka noqonaya, wuxuuna xusay in jaamacadda iyo maamulkeeda oo isku duuban ay dedaal badan u galeen sidii loo heli lahaa aqoon jaamacadeed oo tayo sare leh, taasoo uu tilmaamay in guulo badan laga gaaray, lana sii wadi doono.
Ugu dameyn, xaflada waxaa hadalo ka jeediyey xubno ay ka mid ahaayeen Dr. C/raxmaan Macalin Fiqi oo ka mid ah aasaasayaasha Jaamacadda Banaadir iyo Hormuudka kulliyada culluunta Caafimaadka ee Jaamacadda Banaadir Dr. Xasan Nuur Warsame kuwaasoo ka Warbixiyay qaabka waxbarashada ee ay jaamacada uga qayb-qaadan doonaan dhakhaatirta Waddanka Turkiga ee lagu soo daray macalimiinta, waxayna ardayda ugu baaqeen iney ka faa’iideystaan mudada jaamacada la joogaan.